Gaari nuuca qaadka lagu qaado oo lagubay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Gaari nuuca qaadka lagu qaado oo lagubay
Gaari nuuca qaadka lagu qaado oo lagubay
Al-shabaab ayaa xilliyadii dambe gubaysay gaadiidka jaadka u sida degmada Buur-hakabo iyo degmooyinka hoos yimaada gobalka Bay, iyadoo maalintii shalay ahayd gaari jaad u sida lagu qabtay meel Baydhabo u jirta 13-KM.
Gaarigan oo jaad u waday degmada Buur-hakabo ayaa isla goobtii lagu qabtay dab lagu qabadsiiyay, iyadoo sidoo kalena la gorwacay milkiilihii jaadkii gaariga lagu dul-gubay.
Ehellada wiilka ayaa ku eedeeyay Al-shabaab inay wiilkooda goraceen jaadkii uu u waday Buurhakabana gubeen, iyadoo mid ka mid ah malaaqyada Baydhabo oo la yiraahdo Malaaq Ibdiyow uu HOL u sheegey dhacdadaas naxdinta leh.
Magaalada Baydhabo ayaa waxay ciidamada ammaanka ka wadaan qabqabashada dhallinyarada, kaddib shaki laga qabo inay Al-shabaab xiriir la leeyihiin ayna qayb ka qaataan falalka ammaan-darro ee ay Baydhabo ka sameyso.
Previous articleCILMI RAAXO LAGUMA BARTO (QISADII XIROWGA & NAXASHKA – Q.3AAD- KHITAAM
Next articleDagaalo cusub oo Alshabaab deefaano kula wareegeen